नायिका प्रियंका कार्की पोखरामा यस्तो अवस्थामा भेटिईन् ! - Dna Nepal
नायिका प्रियंका कार्की पोखरामा यस्तो अवस्थामा भेटिईन् !
२९ बैशाख २०७६, आईतवार ०७:३६
पोखरा, बैशाख २९ ।
सँधै व्यस्त रहने नायिका प्रियंका कार्की बेला बेला चर्चामा आउने गरेकी छन् । अधिकाशंको रुचीमा पर्ने नायिका प्रियंका बेला बेला तस्बिर तथा पहिरनका कारण चर्चा आउने गरेकी हुन् । यतिबेला उनी फेरि चर्चामा आएकी छन् ।
उनले केही तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी छन्, जुन तस्बिर निकै भाईरल बनेका छन् । हुनत उनी आफुलाई चर्चामा ल्याउन तथा भाईरल बन्नकै लागि बेला बेला यस्ता खाले तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् ।
गर्मी महिना सुरु भएसँगै उनले स्विमिङ पुलका हट तस्विरहरु सार्वजनिक गरेकी छन् । सार्वजनिक तस्विरमा उनले लेखेकी छन्, ‘स्विमिङ पुल चाहना भन्दा पनि आवश्यकता हो ।’ उक्त तस्विर उनले पोखरामा साथीहरुसँग खिचाएकी हुन् । तस्विरमा उनीहरु बिकिनी अवतारमा निकै सुन्दर देखिएकी छन् । प्रियंका भने कालो बिकिनीमा छिन् ।
केही समयअघि होलिडे मनाउन उनी इण्डोनेशिया गएकी थिईन् । प्रेमी आयुष्मानसँगै उनले इण्डोनेशियामा होलिडे मनाईन् । त्यो बेला पनि उनले समुन्द्र किनारमा रमाइरहेका तस्बिर सार्वजनिक गरेकी थिईन् । प्रियंकाले आफ्ना निकै हट तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी थिईन् । विकीनी लगाएको तस्बिरमा दर्शकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाएकी थिईन् । (लालखवर)